नेपालमा देखिएको को’रोनाको भेरि’यन्ट बेलायतकोभन्दा ५० प्रतिशत बढी संक्रा’मक ; के के गर्छ त यसले ? – Sadhaiko Khabar
नेपालमा देखिएको को’रोनाको भेरि’यन्ट बेलायतकोभन्दा ५० प्रतिशत बढी संक्रा’मक ; के के गर्छ त यसले ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ०५, २०७८ समय: २०:१६:३४
काठमाडौ/ स्वा’स्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार भारतको एउटा प्रयोगशालामा को’रोनाको जीन सिक्वन्सिङ गर्दा बी।१।६१७।२ भेरिअन्ट र बी।१।६१७।१ भेरिअन्ट पुष्टि भएको छ ।
हालसम्म नेपालमा यो परिवर्तित भाइ’रससहित तीन किसिमका भेरि’अन्ट पुष्टि भएको मन्त्रालयद्वारा मङ्गलवार साँझ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विश्व स्वा’स्थ्य सङ्गठनले मे महिनामा त्यसलाई भेरि’अन्ट अफ ग्लोबल कन्सर्न भनेर वर्गीकरण गरेको थियो । अर्थात् उसका अनुसार यो प्रकारको को’रोना भाइ’रस चि’न्ताको विषय हो ।
यस सन्दर्भमा इपिडे’मियोलोजी तथा रो’ग निय’न्त्रण महाशाखाले तेस्रो भेरि’यन्ट यस अघि देखा परेको भेरि’यन्ट भन्दा ५० प्रतिशत बढी संक्रा’मक रहको बताएका छन् । इपिडेमि’योलोजी तथा रो’ग नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले शुरुमा बेलायतमा पत्ता लागेको भेरि’यन्ट भन्दा यो भेरि’यन्ट ४० देखि ५० प्रतिशत बढी संक्रा’मक रहेको बताए । यो भेरि’यन्ट २० देखि ४४ वर्ष उमेर समुहमा उ’च्च जो’खीम रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
विश्व स्वा’स्थ्य सङ्गठनका अनुसार गत वर्षको अक्टोबर महिनामा भारतमा पहिलो पटक बी।१।६१७ भेरिअन्ट पुष्टि भएको थियो । डब्ल्यूएचओले मे १२ तारिखमा जनाएअनुसार त्यो दिनसम्म ४४ वटा देशमा उक्त भेरि’अन्ट देखिएको थियो ।
भारतसँग खुला सीमा रहेको नेपालमा पछिल्लो समय ती’व्र गतिमा वि’रामी बढ्न थालेपछि भारतमै देखिएको भेरि’अन्ट हो कि भन्ने आश’ङ्का थियो । विश्व स्वा’स्थ्य संगठनले भनेको छ । उक्त भेरिअ’न्टको प्रकृतिबारे डा. पौडेलले थपे, यो मानव शरीरमा अलि धेरै सङ्क्रा’मक हुनसक्छ र एन्टि’बडी विकास भइसकेका मान्छेमा पनि एन्टिबडीले अलिकति कम काम गर्छ भन्ने देखिएको छ ।